Taiwan ရှိစက်ရုံတစ်ရုံနှင့်အတူအရည်အသွေးမြင့် 1.5 ကီလိုဆန် ထုတ်လုပ်သူနှင့် 1.5 ကီလိုဆန် ပေးသွင်းသူ၏လမ်းညွှန်ကိုရှာပါ။
NEW WEI-LIN ENTERPRISE CO., LTD. ၏ခြုံငုံဖြေရှင်းချက်များအတွက်ဦးဆောင်ဒီဇိုင်နာ & ထုတ်လုပ်သူဖြစ်ပါတယ် 1.5 ကီလိုဆန်သုတေသန & ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး, ထုတ်လုပ်မှု & ကုန်ထုတ်လုပ်မှု, Marketing, အင်ဂျင်နီယာ, စီမံခန့်ခွဲခြင်းနှင့်လေ့ကျင့်ရေးဝန်ဆောင်မှုများကဲ့သို့သောစီးပွားရေးပေါင်းစည်းသော။ ကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းပြည်တွင်းနှင့်နိုင်ငံတကာစားသုံးသူ '' ဝယ်လိုအားအညီသစ်ဆန်းသောဒီဇိုင်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့အဆင်သင့်ရှိပါတယ်။
ပုံစံ - 9-5
Chishang ဆန် 1.5 ကီလိုဂရမ်
Chishang Fa Cai ဆန်တွင်ထုပ်ပိုးထားသောအရာသည်ဘုရားသခင်ချမ်းသာကြွယ်ဝမှုပုံစံဖြစ်သည်,၎င်းသည်ချစ်စရာကောင်းသောအနီရောင်ထုပ်ပိုးမှုကိုအသုံးပြုသည်,အရာလက်ဆောင်များနှင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအသုံးပြုမှုများအတွက်သင့်လျော်သည်.
Chishang ဆန်ထုတ်လုပ်မှုareaရိယာသည်ဝမ်တွင်တည်ရှိသည်’စပါးစိုက်areaရိယာ.ဝမ်’စပါးisရိယာသည် Xinwulu မြစ်မှရေလောင်းသောရွှံ့မြေဖြစ်သည်.၎င်းသည် Chishang ဆန်၏အနှစ်သာရဖြစ်သည်.နာမည်ကြီးဘရောင်းရိပ်သာလမ်း,Tiantang လမ်းနှင့် Jincheng Wushu သည်ထုတ်လုပ်မှုideရိယာ၏ဘေးတွင်ရှိသည်. .
ပြည်နယ်အတွင်းရှိ Chishang ဆန်သည်အဘယ်ကြောင့်ကျော်ကြားသည်ကိုအောက်ပါအချက်များကဖော်ပြသည်:
၎င်းသည်အမြင့်ဆုံးမီတာ ၃၀၀ အမြင့်ဆုံးတွင်တည်ရှိသည်,နေ့နှင့်ညအကြားကြီးမားသောအပူချိန်ခြားနားချက်နှင့်အတူ,လုံလောက်သောနေရောင်ခြည်.ရှည်လျားသောကြီးထွားမှုကာလသည်ဆန်အတွက်လုံလောက်သောအနားယူမှုနှင့်ရင့်ကျက်မှုအချိန်ကိုပေးနိုင်သည်.ဆန်အရည်အသွေးသည်သဘာဝမဟုတ်ပါ.
နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း,အော်ဂဲနစ်-ရှင်းရှင်းလင်းလင်းရှိသောရေသန့်သည် Xinwulu မြစ်မှတိုက်ရိုက်ရေပေးသည်,မြေဆီသြဇာကိုစဉ်ဆက်မပြတ်ဖြည့်ဆည်းနိုင်သည်.
အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ရေအရည်အသွေးအပြင်,Chishang မြို့နယ်သည်အမြင့် ၂၅၀ မှ ၂၉၃ မီတာအမြင့်တွင်ရှိသည်,ထို့ကြောင့်နေ့နှင့်ညအကြားအပူချိန်ကွာခြားမှုသည်ကြီးမားသည်.ဤတွင်စိုက်ပျိုးသောစပါးသည်ကာလရှည်ကြာစွာစိုက်ပျိုးခဲ့သည်,နှင့်ဆန်ဝိသေသလက္ခဏာများကိုအပြည့်အဝအသုံးချနိုင်ပါတယ်.သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့်ရာသီဥတုအခြေအနေများပေါင်းစပ်နှင့်အတူ,Chishang မြိ့ုနယ်သည်အခြားတိုင်းပြည်များနှင့်မြို့များနှင့်တူညီသောဆန်စပါးကိုစိုက်ပျိုးလျှင်ပင်,ထုတ်လုပ်သောဆန်၏အရည်အသွေးသည်အထူးကောင်းမွန်သည်,နှင့်အရသာထူးခြားတဲ့ဖြစ်ပါတယ်.စင်ကြယ်ခြင်းနှင့်ညစ်ညမ်းမှု-အခမဲ့ကြီးထွားလာပတ်ဝန်းကျင်,အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ရာသီဥတုအခြေအနေနှင့်အတူဒွန်တွဲ,Chishang မြို့နယ်ကိုဆန်စပါးစိုက်ပျိုးရန်အတွက်အလွန်သင့်လျော်သောနေရာတစ်ခုဖြစ်စေပါ,နှင့်ဆန်စိုက်ပျိုးမှုအရည်အသွေးကိုသဘာဝကျကျထူးခြားတဲ့ဖြစ်ပါတယ်.
အမျိုးမျိုး:Japonica ဆန်(သန့်ရှင်းသော Chishang ဆန်)
ထုပ်ပိုးသတ်မှတ်ချက်:၁.၅ ကီလိုဂရမ်/အိတ်,အိတ် ၁၂ လုံး/ပုံး
မူလနေရာ:Chishang,ung,ထိုင်ဝမ်,Xinwuluxi ဆည်မြောင်းခရိုင်,Chishang Township Office နှင့်လက်မှတ်ထိုးသည့်စတစ်ကာများ,၁၀၀%Chishang ဒေသခံဆန်
999999999 http://schema.org/InStock USD 2020-12-31 https://www.antiagingproducts.com.tw/my/15-kg-rice.html
1.5 ကီလိုဆန် ၏အကောင်းဆုံးလမ်းညွှန်ကိုစျေး ၀ ယ်ပါ။ 1.5 ကီလိုဆန် ကုန်ထုတ်လုပ်သူ၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားရောင်းသူနှင့်ဖြန့်ချိသူ 1.5 ကီလိုဆန် ၏အမြင့်ဆုံးအရည်အသွေးကိုသိရန်လိုအပ်သည်။ Taiwan